Karan Johar: Waxaan Ahay Taageero Kangana Mana Ahi Shaqsi Iska Fogeyay Ayada Ee Waan Soo Dhaweysanaya! - Hablaha Media Network
Karan Johar: Waxaan Ahay Taageero Kangana Mana Ahi Shaqsi Iska Fogeyay Ayada Ee Waan Soo Dhaweysanaya!
HMN:- Filimsameye Karan Johar waxay u muuqata in dhamaan uu doonaya qilaafada kala dhaxeyan xidigaha Bollywoodka inuu soo afjaro.
Karan iyo Kangana ayaa ahaa kuwa isku dhacsan kadib markii qofwalba uu bilaway qofka kale inuu duqeyo, sheekada waxay bilawatay xili ay Kangana ka qeyb gashay Showgii Koffe With Karan qeybtii 5-aad.
Kangana ayaa Karan ku tilmaamtay shaqsi qaraabadisa garab kusiiya fanka balse aanan caawinenin dadka kale ee an dad meesha u joogin laakin uu dadkiisa uun ku caawiye fanka inee heer ka gaaran iyo inuu kusoo uruuriyo mesha.
hadaba Karan arinkaas wuu kaso jawab celiyay asigoo waliba sheegay in Kangana ay wanagsantahay gabi ahaan ba inee isaga tagto Bollywoodka maadama uu cabaadkeeda batay ayna noqotay qof dhibane ah marwalbe oo uun wax uun tirsanaya.”
hadaba intaa kadib waxaa dhacday in Barkha Dutta naagta lagu magacaabo ay wareysi la yeelato filimsameyahan ayadoo suaal ku aadan Kangana weydisay taaso aheyd in uu Raali Galin kabixiyo maadama uu yiri waad cabaad badantahay Kangana asigoo hadlaaya wuxuu yiri,
” maxaan raali galin oga baxshaa arinkaas? kaliya waxay ka hadashay Kangana fikirkeeda waana qadariyay fikirkaas ana sido kale waxaan kahadlay fikirkeyga.
aniga Kangana taagero buuxdo ayaan u ahay mana ahan qof aan kala tagnay oo an iska fogeyay balse waa qof saaxiibo qaali ah an noqoneeno igana mid noqon doonto waana soo dhaweysana.”
Karan waxaa kasoo yeeray hadal wanaagsan balse Kangana seefteda ma dhigi doonta oo miyee la heshiin doonta filimsameyahan mise halkeedi ayee kasii wadi doonta dagaalka?
waxaan sugnaaba waa jawaabta Kangana iyo waxa ay kadhahdo arinkaan.